मदन कृष्ण श्रेष्ठले यस्तो भनेपछी समाल्न सकिनन् आफुलाई अंगालो हालेर यसरी रो’ईन्- वियोन्स ।(भिडियो सहित)
काठमाडौ : लक’डाउनपछि सार्वजनिक भएका गीतहरुमध्ये सर्वाधिक लोकप्रि’यता हासिल गरेको ‘फुलबुट्टे सारी’ बोलको गीत विश्व बजारमै चर्चामा छ ।
यो गीतलाई युगान्डाकी गायिका दे क्वाप्टेन वियोन्स फमासीले आफ्नो स्वरमा गाइन् । वियोन्सको गीतले युटुबमा हंगामा नै मच्चायो । यो गीत वियोन्सको स्वरमा सार्वजनिक भएपछि गायक तथा कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठले उनलाई भेट्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।
अब भने मदनकृष्ण र वियोन्सविच भेटघाट भएको छ । मदनकृष्णलाई भेट्दा वियोन्स रोएकी थिइन् । यो गीतको लेजेन्डरी भर्सन गायका गायक तथा कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठलाई भेटेपछि वियोन्सले आफ्नो जिन्दगीको सबैभन्दा ठूलो सफलता नै मदनकृष्णलाई भेट्नु भएको बताइन् ।
उनले भनिन्–‘जब मैले उहाँको स्वरमा फुलबुट्टे सारी सुने, म उहाँको फ्यान भएकी थिएँ । मेरो जिन्दगीकै सबैभन्दा ठूलो सफलता नै उहाँलाई भेट्नु हो । म निक्कै खुशी छु ।’
मदनकृष्णले पनि वियोन्सको स्वरको प्रशंसा गर्दै भने–‘गीतसंगीतबाट संसारभरका मानिसहरु नजिक हुन सकिने रहेछ भन्ने पु’ष्टी भएको छ । जब मैले वियोन्सको गीत सुनेँ, उनीसँग टाढा भएपनि पूर्व जन्मको नाता रहेछ कि भन्ने महशुश भएको थियो ।’ मदनकृष्णले यस्तो भने पछी वियोन्स भावुक बनिनन् र आँखा रसाय।
२०७७ चैत्र २४, मंगलवार ००:११ गते 1 Minute 1092 Views
छापा हान्न गएका प्रहरी मोबाईल चोरेर फर्किए, भिडियो भाईरल !
महंगी बढ्याे सर्वसाधारण भन्छन – कसरी बालबच्चा पाल्ने, कसरी आफू बाँच्ने ?
अमेरिका र चीनबीचको उडान स्थगित गर्ने विषयमा तनाव बढ्दै !
मन्त्री श्रेष्ठ भनुहुन्छ : नेकपा भित्रको समस्या अल्पमत–बहुमतबाट समाधान हुन सक्दैन ।